फेरी नेकपामा खटनपटन, नेकपा नेतृत्व फेरि असफल ! - समय-समाचार
फेरी नेकपामा खटनपटन, नेकपा नेतृत्व फेरि असफल !
Oct 18, 2020 असफल, नेकपामा खटनपटन, नेतृत्व, पार्टी एकता
काठमाडौं, कात्तिक २ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्व पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउन फेरि असफल भएको छ ।
गएको भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्न असोज मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो ।
तर, स्थायी कमिटीको ‘म्यान्टेड’अनुसार काम हुनुको सट्टा नेकपामा नयाँ–नयाँ विवाद देखिन थालेका छन् ।
विभाजनको संघारमा पुगेको पार्टीलाई जोगाउन सफल भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले एकताका बाँकी काम असोज मसान्तसम्म टुंगो लगाउन समयसीमा तोकेको थियो ।
स्थायी कमिटीका निर्णय र सोही आधारमा भदौ २९ गते पार्टीको आन्तरिक एकताको लागि जारी १५ बुँदे सहमतिपत्रको मुख्य बुँदामध्येको एक पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने समयसीमा नै गुज्रिएको छ ।
स्थायी कमिटीको उक्त बैठकको निर्णयहरुलाई नेताहरुले नयाँ ‘कोर्ष’को थालनीको संज्ञा दिएका थिए ।
तर, एक महिना बितिसक्दा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिनबाहेक कुनैपनि बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
स्थायी कमिटीले निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिएअनुसार असोज ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने गरी मस्यौदा ल्याउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दियो । तर, अध्यक्षद्वय र महासचिव पनि एकताको खाका ल्याउन असफल भए ।
स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको जिम्मा सचिवालयले लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पनि मुख्यगरी नेतृत्वको इच्छाशक्ति र केही परिस्थितिजन्य कारण पनि एकता टुंगो लाग्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
हुन त एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे समय तोकेरै दिएको म्यान्डेट यो पहिलो भने होइन । २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा गरिरहँदा तीन महिनाभित्र एकताका सम्पूर्ण काम टुंगो लगाइसक्ने घोषणा गरिएको थियो ।
दोस्रोपटक गएको माघ १५–१९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले १५ दिनभित्र पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम टुंगो लगाउने म्यान्डेट दिएको थियो ।
तोकिएको समयसीमाभित्र म्यान्डेट कार्यान्वयन हुनुको सट्टा पार्टीमा एकपछि अर्को विवाद देखिन थालेको छ ।
हुन त अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच हुने छलफलमा एकता टुंग्याउनेभन्दा मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनका एजेन्डाले प्राथमिकता पाइरहेको छ ।
पार्टी एकीकरण भएको २८ महिनासम्म पनि एकताका सम्पूर्ण काम टुंगो लाग्नुको सट्टा पार्टीभित्र नयाँ विवाद देखिन थालेका छन् ।
स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार असोज ३० गते अर्थात् शुक्रबार एकताका सबै काम सम्पन्न भएको घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यो असफल भएपछि शीर्ष नेतृत्वप्रतिको विश्वास र प्रतिबद्धतामाथि पुनः प्रश्न उठाउने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।